Drôna Marketing tsy mitantana | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 10, 2006 Alakamisy, May 4, 2017 Douglas Karr
Ny zoma lasa teo dia niady hevitra lehibe tamin'ny namako iray aho, Bill Hammer. Ny toerany dia ny fananana teti-bolan'ny tafika goavana fa tsy nanao afa-tsy ny nandevina ny toekarena. Nanohitra aho fa ny miaramila, amin'ny lafiny maro, dia mitovy amin'ny vola ampiasain'ny governemanta amin'ny fampandrosoana teknolojia vaovao sy famokarana betsaka. Ampiako ihany koa fa, amin'ny asa 'famonoana na famonoana', ny tsatoka dia tsy avo kokoa raha resaka filàna kalitao sy famokarana.
(Aza manoratra ahy fandrahonana ho faty 'war mongerer' amin'ity lahatsoratra ity. Tena marina aho tsy milaza fa ny vidin'ny teknolojia sy ny famokarana betsaka dia mendrika handraraka ra.)
Amin'izay rehetra voalaza dia jereo ny lahatsoratr'i Gizmodo ao drôna marketing tsy mitantana. Fananarana sy mandeha ho azy! Mazava ho azy, tsy azoko antoka fa fandresena ho an'ny mpanjifa izany. Ny zavatra farany tadiaviko dia ny sidina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fikafika ny PDA bluetooth ahy amiko fa amidy ny deodorant ny block manaraka.
Angamba nanana teboka i Bill…
Momba ny fitaomana sy ny mandeha ho azy